Tag: fiarovana | Martech Zone
Sabotsy, Janoary 2, 2021 Zoma, Martsa 5, 2021 Douglas Karr
Tsy miresaka momba ny fiarovana an-tserasera na ny tranonkala maizina matetika izahay. Na dia niasa tsara aza ny orinasa tamin'ny fiarovana ireo tambajotran'izy ireo anatiny, ny fiasana an-trano kosa dia nanokatra orinasa ho amin'ny fandrahonana fanampiny amin'ny fidirana an-tsokosoko sy fikafika. 20% amin'ireo orinasa no nilaza fa niatrika fanitsakitsahana fiarovana vokatry ny mpiasa lavitra. Mijanona ao an-trano: ny fiatraikan'ny COVID-19 amin'ny fiarovana ny varotra Cyberecurity dia tsy andraikitry ny CTO intsony. Satria ny fahatokisana no vola sarobidy indrindra amin'ny
Ireo fanafihana miisa 5 namboarina tamin'ny tranokala ecommerce
Alarobia, Jolay 1, 2020 Alarobia, Jolay 1, 2020 Douglas Karr
Iray amin'ireo antontan'isa manaitra kokoa momba ny COVID-19 sy ny hidin-trano dia ny fitomboan'ny hetsika e-varotra: ny COVID-19 dia nanafaingana ny fitomboan'ny e-varotra, araka ny tatitra nataon'ny Adobe nivoaka androany. Ny fandaniana an-tserasera totalin'ny Mey dia nahatratra $ 82.5 miliara, tafakatra 77% isan-taona. John Koetsier, COVID-19 Fitomboan'ny E-Varotra '4 hatramin'ny 6 Taona' Tsy misy indostria mbola tsy voakitika… lasa virtoaly ny kaonferansa, nifindra tany amin'ny fitantanana fianarana sy amin'ny Internet, fivarotana ny sekoly.
Alahady, May 10, 2020 Alahady, May 10, 2020 Douglas Karr
Ahoana ny famoahana feed podcast fampiantranoana ivelany ho fanao mahazatra ao amin'ny ohatra WordPress anao.